Nhau - Kuongorora kweVatengi
Mushure menguva refu yekuvandudza muindasitiri yemakenduru, isu Winby kenduru yakaunganidza vatengi vazhinji uye takagamuchira kurumbidzwa kwakakwirira kubva kunyika zhinji. Izvi zvinotevera kuziva kwevamwe vatengi kwezvigadzirwa nemasevhisi.
Is izvi zvinotyisa, uye ndakaedza kumakenduru angu uye zvinoshanda mushe, asi zvinoda maawa maviri kusvika matatu ekugadzira dziva rakanyungudika zvakakwana. asi zvakazara ndinoda ichi chigadzirwa. Ndinovimba pane chero sarudzo, semadhamhu eiyo tambo yechirongo ine ma7-8cm madimita.
End Wendy anga ari wekutaurirana kwangu neichi odha uye nebasa rake revatengi raive rakanakisa! Ini ndinokurudzira zvikuru kubata nekambani iyi.
▶ Ini ndakaraira magirazi matema egirazi, aive akafanana chaizvo nemufananidzo. Ndingadai ndakada kutumira nekukurumidza asi ivo vakasvika panenge chaizvo apo mutengesi pavakati vaizoita uye ini ndakagamuchira mijenya yekutakura uye yekutevera info. Iwo aive akarongedzwa zvakanaka uye kunze kwemidziyo mazana matatu yakarairwa kuti imwe chete yakauya ichiputswa.
▶ Ndiri kufara kwazvo nehunhu uye kutaridzika kwechigadzirwa ichi. Ini ndanga ndichitsvaga chinotsiva chirongo chebhizinesi rangu remakenduru uye ndokuwana odha yeiyo 14oz matte nhema uye chena zvirongo zvine muvharo wehuni. Ndakagamuchira odha yangu nekukasira kufunga kuti yakabva kuChina. Ndiri kutarisira kuisa odha yakawanda munguva pfupi iri kutevera apo ini ndinogona kuwana MOQ yemayuniti e1,000.
Makenduru emhando yepamusoro yewakisi. Zvakanyatso kurongedzwa uye kuendeswa nenguva. Sevhisi yaikurumidza uye ine hushamwari. Unogona kuraira zvakare.
▶ Zvivharo zvacho zvaive chaizvo sekutsanangurwa uye sevhisi yaive yakanaka. Ndiri kunyatsogutsikana.
▶ akanaka mhando huni wick uye anopisa mushe. Wendy Fu ane hunyanzvi uye akakura kutaurirana naye. anokuraira zvaunoda. mitengo yakatendeseka zvakare. waita hako!
Heino mifananidzo kubva kune vatengi vedu.
Post nguva: Kukadzi-07-2021